ခေါက်ချိုးညီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ခေါက်ချိုးညီခြင်း (အင်္ဂလိပ်: Symmetry, ဂရိ: συμμετρία) သည် ရှေးဂရိဘာသာတွင် သင့်တော်မှန်ကန်သည့် အချိုးအဆ၊ အစီအစဉ်၊ အတိုင်းအတာ ကိုက်ညီမှုဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ နေ့စဉ်သုံးစွဲသော ဘာသာစကားအနေဖြင့် လှပ၍ ညီညာသော အချိုးအဆနှင့် ဟန်ချက်ညီမျှမှု ဟုရည်ညွှန်းနိုင်သည်။[မှတ်စု ၁] သင်္ချာဘာသာရပ်၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပို၍တိကျသော အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ရှိ၍ များသောအားဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချို့ (Transformation function)အောက်၌ မပြောင်းလဲ အမြဲတစ်သမတ်တည်းရှိသော အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးစွဲသည်။ ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ချို့မှာ အရာဝတ္ထု၏ အနေအထားမပြောင်းဘဲ ရွေ့ရှားခြင်း(translation)၊ အချိုးညီ ရောင်ပြန်ထင်ဟပ်မှု(reflection)၊ ဗဟိုချက်တစ်ခု၌ အရာဝတ္ထုလည်ခြင်း(rotation)၊ အရာဝတ္ထုအချိုးအဆပြောင်းလဲခြင်း(scaling)များဖြစ်သည်။ ဤ နေ့စဉ်သုံးနှင့် သင်္ချာဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းအဓိပ္ပာယ်များမှာ ရံခါ၌ ခွဲခြားပြောဆိုနိုင်သော်လည်း အနုစိတ်သဘောအားဖြင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည်။
သင်္ချာဆိုင်ရာ ခေါက်ချိုးညီခြင်းကို အချိန်ဖြတ်သန်းကုန်ဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။ ခေါက်ချိုးညီခြင်းကို နေရာအနေအထားဆက်သွယ်ချက်သဘောတရား(spatial relationship)အနေဖြင့်လေ့လာခြင်း၊ ဂျီဩမေထြီပြောင်းလဲခြင်း(geometric transformation)ဖြစ်စဉ်မှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းမှ တစ်ဆင့်​သော်လည်းကောင်း လေ့လာစူးစမ်းနိုင်သည်။ ထို့ပြင် သီအိုရီပုံစံငယ်များ၊ ဘာသာစကား၊ ဂီတ တို့ပါဝင်သော စိတ္တဇနယ်ပယ်(စိတ်ကူး) အရာဝတ္ထုများ၏ ရှုထောင့်သွင်ပြင်မှလည်း လေ့လာစူးစမ်းနိုင်သည်။[မှတ်စု ၂]
ခေါက်ချိုးညီခြင်းသဘောကို မလိုက်နာသော (သို့) ပျက်ကွက်သော စနစ်ကို ခေါက်ချိုးမညီခြင်း(asymmetry) ဟုလည်းသုံးစွဲသည်။ မှန်ရိပ်ခေါက်ချိုးညီ၊ ပတ်လည်ခေါက်ချိုးညီ၊ ပုံရိပ်ပွားတူညီ စသဖြင့် အမျိုးအစားအလိုက် အမည်ကွဲများရှိသည်။
↑ Symmetric objects can be material, such asaperson, crystal, quilt, floor tiles, or molecule, or it can be an abstract object structure such asamathematical equation oraseries of tones (music).
↑ "symmetry"။ Online Etymology Dictionary။
↑ Zee၊ A. (2007)။ Fearful Symmetry။ Princeton, N.J.: Princeton University Press။ ISBN 978-0-691-13482-6။
↑ Symmetry and the Beautiful Universe,Christopher T. Hill and Leon M. Lederman, Prometheus Books (2005)
↑ The Definitive Glossary of Higher Mathematical Jargon — Invariance (in en-US) (2019-08-01)။
↑ Mainzer၊ Klaus (2005)။ Symmetry And Complexity: The Spirit and Beauty of Nonlinear Science။ World Scientific။ ISBN 981-256-192-7။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခေါက်ချိုးညီ&oldid=701716" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။